गिरिजाबाबुको निधनले देशले एक निडर राजनैतिक महायोद्धालाई गुमाउनु परेको छ | नेपाल इटाली डट कम
March 20, 2010 — nepalitaly
काठमाडौं, /स्व. कृष्णप्रसाद कोइरालाकी कान्छी श्रीमती दिव्या कोइरालाका कान्छा छोराका रूपमा सन् १९२५ (सं. १९८२) मा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म भारतको बिहार राज्यको टेडी, सहर्षामा भएको थियो । भारतमा जन्मेर हुर्केका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको स्वतन्त्रताको संग्रामलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएका थिए। उनले सानै उमेर देखी उठल पुथल राजनैतिक अवस्थामा हुर्कनु परेबाट उनलाई राजनितीले आकर्षित पारेको थियो। यसकारण गिरिजाबाबुले सानै उमेरमा राजनितिमा प्रवेश गरेका थिए।
गिरिजाबाबुले नेपाल फर्के पछी सुषमा कोइरालासित विवाह गरेका थिए। सुषमा कोइरालाबाट गिरिजाबाबुको एक मात्र सन्तान सुषमा कोईराला जन्मेकी हुन। २०३१ सालमा गिरिजाबाबुको धर्मपत्नी सुष्मा कोइरालाको निधन भएको थियो। गिरिजाबाबुले
गिरिजाबाबुले माओवादीलाई द्बन्दबाट मुल राजनैतिक धारमा फर्काएका थिए। हालै मात्र देशको बिषम राजनैतिक परिस्थितीको निवारणका लागि उहाँको नेतृत्वमा उच्च राजनैतिक संयन्त्रको गठन भएको थियो। यस्तो परिस्थितीमा गिरिजाबाबुको निधनले गर्दा देशको राजनैतिक अवस्था जटिल हुने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैनन्। गिरिजाबाबुको निधनले देशले एक निडर राजनैतिक महायोद्धालाई गुमाउनु परेको छ।
« गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन
दसगजामा भारतीयले बनाए नहर »